बाँकेमा बाढीले आठ सय घर डुबानमा, सयौ घरपरिवारको विचल्ली
Tue, Sep 26, 2017 मंगलवार, असोज १०, २०७४
सुरेन्द्र काफ्ले शनिवार, साउन २८, २०७४ 2303 पटक पढिएको
डुवान भएको डुडुवा गाउँपालिका ४ लालपुर गाउँ । तस्बिर : अन्नपूर्ण
लालपुर(डुडुवा) : ‘बिहान उठ्न नपाउदै बाढी गाउँमा पस्यो, भागभाग भयो, चिया त के अहिलेसम्म पानी पनि खान पाएका छैनौ।’ डुडुवा-४ का गुरुदयाल मिश्र भन्छन्, ‘बालबच्चा भोकभोकै छन्, घरमा कम्मर कम्मर पानी छ, यहाँ रोडमा आएर बसेका छौँ।’ उनले आफ्ना ७ जनाको परिवार रोडमा आएर बासिरहेको बताए।
उनले बिहान ७ बजे तिर घरमा पानी बस्न थालेको छ। बाढी पुरै गाउँ डुवानका परेका कारण कुनै समान निकाल्न नपाएको दुखेसो पोखे। ‘केही निकाल्न पाएनौँ, उठेर, दिसा पिसाब समेत गर्न नपाउदै बाढी गाउँ पसिगयो, ज्यान बचाएर भागेर रोडमा आएका छौँ,’ मिश्रले भने।
डुडुवा– ४ का करिम खाँले बाढी घर डुवाएपछि धेरै सर्वसाधारण पक्की घरमा छत छतमा बसिरहेको बताए। उनले बाढीका कारण सर्वसाधारण भोकभौकै रहेको बताए। उनले भने, ‘भोगर ज्यान सम्म बचाएका छौँ, कसैले केही आएका छैनाँै। उनले डुडुवा– ४ खालेमसाहामा मात्रै ३ सय बढी घर डुवानमा परेको बताए। उनले पीडितहरु खाने कुरा व्यवस्था गर्न समेत माग गरे। पुरै गाउँ डुवानमा छ , ‘घर पुरै पानी छ, राति कहाँ सुत्ने, बालबच्चालाई कहाँ राख्ने ? ’ बाढी पीडित गोविन्द चौहानले भने। उनले आफ्नो १५ को परिवार रोड आएर बासिरहेको बताए। उनले घरमा राखेको सबै अन्य समेत नष्ट भएको बताए।
उनले बेलुका ४ बजेसम्म उद्धार र राहतको लागि कोही नआएको गुनासो गरे। डुडुवा खोला र राप्ती नदिमा आएको बाढीले डुडुवा गाउँपालिका – ५ को खजुराका ५० घर , वडा नम्बर ४ को लालपुर र खाले मसाहाका ३ सय घर, वडा नम्बर ३ का कटैया, राजारामपुरुवा र लोथपुरुवा, वडा नम्बर २ अमृतपुरुवा, द्रोणपुरुवा, नौरीगौडीका पुरै घर डुवानमा परेका छन। त्यस्तै वडा नम्बर १ खडैचा र पिप्रहवा गाउँ्र पुरै डुबेको छ। डुडुवा १ चौफेरी सम्पर्क विहिन अवस्थामा छ। भने खजुरा गाउँपालिका – ६ उढरापुरको ८ विगाहा र १० विगाहामा समेत मान खोलाले डुवान गरेको छ। खजुरा गाउपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले उढापुरमा ३ सय बढि विस्थापित भएका छन्। उनले विस्थापितहरु स्थानिय विद्यालयमा राखिएको जानकारी दिए। उनले भने, विद्यालयमा राखेर फास्ट फुड उपलब्ध गराएका छौँ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १,२, ३, ५,६, ७ तथा डुडुवाको वडा नम्बर १ मा सयौ घर डुवानमा परेका छन्। नरैनापुर गाउँपालिका गगाँपुर, मटैहियामा धेरै घरहरु डुवानमा परेका छन्। साविकको फत्तेपुर गाविसको वडा नम्बर ९ डलैया र टेपरी दजनौ घरहरु डुवान परेका छन। स्थानिय सिद्धेश्वर मावि फत्तेपुरका प्रधानाध्यापक ओम पुनले राप्ती पारी अवस्था अत्यन्त गम्भिर रहेको भन्दै सहयोगका टेलिफान मार्फत आग्रह गरेका छन्।
बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज पौडेलले बाढीका कारण ८ सय बढि घर डुवानमा परेको बताए। उनले भने, ८ सय जति घर डुवान भएको प्रारम्भीक अनुमान गरिएको छ , यथार्थ विवरण आएको छैन। ’रातभर भएको अविरल बर्षाका कारण राप्ती सोनारी – ४ लालपूरमा घर भत्किदा कमिलाल थारुका ३ छोरीको पुरिएर मृत्यु भएको छ १२ बर्षिया अन्जु थारु, ९ बर्षिया सरिता थारु र ७ बर्षिया सुस्मिता थारुको मृत्यु भएको छ। उनले थारुका तीन जना छोराछोरीको लास पुरिएको अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिए। श्रीमती फुल कुमार थारु भागेर ज्यान जोगाएकी छन्। सोही स्थानमा एक जना अज्ञात व्यक्ति समेत मृत्य अवस्थामा फेला परेका छन्।।
नेपालगन्ज : बाढीका कारण पुल बगाउदा पुर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्र्तगतको गन्धेली नाला र गाभर खोलाको पुल बाढीले बगाउदाँ पुर्व पश्चिम राजमार्ग विहानैबाट अवरुद्ध भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। राप्ती नै बाढीले पुल बगाएका कारण सयौ यात्रुहरु अलपत्र परेका छन्। राजमार्गमा दजनौ रुख समेत ढलेको उनले बताए। सडक विभागको प्राविधिक टोली पुल निर्माणको लागि पुगेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘रुख त प्रहरीले पन्छायौ तर सडक बनाउन त पुल बनाउन त हामी सक्ने कुरा भएन, सडक विभागको टोली बनाउन भनेर पुगेको छ।’ यता डुडुवा खोलाले हुलाकी राजमार्गको नेपालगन्ज कम्दी खण्डमा कटान गरेको छ। डुडुवाको कटानले राप्तीपारी सम्पर्क विहिन भएको छ। डुडुवा खोलाले बेतहनीमा सडक कटान गरेको छ। डुडुवा खोलाले हुलाकी सडक कटान गर्दा राप्ती पारीको सम्पर्क विहिन साविकका झत्तेपुर, गगाँपुर, मटैहिया, नरैनापुर लगायत गाउँहरु सम्पर्क विहिन अवस्थामा छन्।
भारतले बाँध नखोल्दा बाँकेका सयौँ गाउँ डुवानमा
नेपालगन्ज : भारतले बाध लक्ष्मणपुर व्यारेजको ढोका नखोलिदा बाँकेका दर्जनौ गाउँ डुवान भएका छन्। भारतीय पक्षले शनिबार साँझ सम्म लक्ष्मणपुर बाध खोलिदिएको छैन। बाँकेका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर खड्काले बहराइचका डिएमसँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क नभएको बताए। उनले भने, डियमसँग पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत सम्पर्क भएको छैन। लक्ष्मणपुर, कलकलवा तटबन्ध र सिमा सडकका कारण बर्षेनी बाँके डुवानमा पदै आएको छ।
उता गृहमन्त्रालय मार्फत अनुरोध गर्दा समेत भारतले बाँध खोलिएको छैन। निमित्त प्रजिअ खड्काले हेलिकप्टरबाट बाढी पिडितलाई खाद्यन्न पुरयाउन काम भइरहेको बताए।
डुडुवा खोलाले कटान गरेका नेपालगन्ज होलिया सडक
सोमवार, असोज ९, २०७४ लाङटाङमा पर्यटकको आगमन सुरु
सोमवार, असोज ९, २०७४ धार्मिक आवरणमा गाँजा कारोवार
सोमवार, असोज ९, २०७४ सुख्खा पहिरोका कारण तम्घास-रिडी सडकखण्ड अवरुद्ध
सोमवार, असोज ९, २०७४ सीमामा लुटिन्छन् दसैं मनाउन भारतबाट फर्कनेहरू
सोमवार, असोज ९, २०७४ एफएम रेडियोमाथि अंकुश लगाउने तयारी
सोमवार, असोज ९, २०७४ ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका १७ वन्दी रिहा
सोमवार, असोज ९, २०७४ मनास्लु आरोहणका क्रममा बेलायती नागरिकको मृत्यु
सोमवार, असोज ९, २०७४ कैदीको सजाय माफी गराउँन दलीय 'लबिङ'
पोखराका बुद्ध लामा बने पहिलो 'नेपाल आइडल'
नेपाल आइडलको टिम कतार प्रस्थान
उत्तर कोरियालाई ध्वस्त पार्नुको विकल्प छैन : ट्रम्प
निजामतीमा स्वैच्छिक अवकाश : १५ हजार कर्मचारी बिदा हुने
१२७ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक, कसले कहाँ जिते? (अपडेट)
बूढीगण्डकी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न संसदीय समितिको निर्देशन 239
कार्यकर्ता पोस्न राज्यकोषबाट १० करोड वितरण 8852
अदालतलार्इ हैरान बनाए निलम्बित सभासद् सञ्जयले 11923
बाटोमै हराए सात हजार कर्मचारी, खोजी गर्न कार्यदल 4927
झुक्याएर सुविधा लिने सांसदको दाउ असफल 2537
आन्दोलनकारी राजपा, जनमत फोरम नेपालको पक्षमा 14825
संसद् विघटनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सकार 962
प्रजातन्त्र र समृद्धिको भूगोल 125
हिन्दुको मात्रै होइन दसैं 816
लाङटाङमा पर्यटकको आगमन सुरु 400
धार्मिक आवरणमा गाँजा कारोवार 944
सुख्खा पहिरोका कारण तम्घास-रिडी सडकखण्ड अवरुद्ध 422
सीमामा लुटिन्छन् दसैं मनाउन भारतबाट फर्कनेहरू 642
एफएम रेडियोमाथि अंकुश लगाउने तयारी 803
४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका १७ वन्दी रिहा 1363
सगुनका संस्थापक गिरीको भारतीय उच्च नेतृत्वसँग भेट 4122
दसैं-तिहारमा नेपाल टेलिकमको छुट नै छुट 25824
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मोबाइलबाटै 1021
सामसङ ग्यालेक्सी नोट ८ सार्वजनिक 2112
पाँच नेपाली युवाले बनाए 'स्मार्ट इलेक्ट्रिक ह्विल चेयर' 2973
सार्वजनिक भयो आईफोन एट र एट प्लस 4766